Devozione a Maria Addolorata: la consacrazione di ogni giorno | PREGHIERA&NEWS
Nraranye nye Meri nke Uju: nraranye nke ubochi obula
Paolo Tescione	Edere ya November 4, 2020 November 4, 2020
Ndewo, Mary, Nwanyị eze nke iru uju, Nne ebere, ndụ, ụtọ na olile anya anyị. Gee ntị na olu Jizọs, onye si n'elu n'elu obe, na-anwụ, na-agwa gị: "Lee nwa gị!". Tụgharịa gị anya, anyị bụ ụmụ gị, kpughere ọnwụnwa na ọnwụnwa, mwute na ihe mgbu, nhụjuanya na mgbagwoju anya.
Anyị na-akpọrọ gị, ezigbo mama m, dịka John, ka ị wee bụrụ onye na-amụ anya na nke na-ahụ n'anya nke mkpụrụ obi anyị. Anyi arara anyi nye anyi n’onwe anyi ka anyi duru anyi jee na Jisos Onye Nzoputa. Obi siri anyị ike na ịhụnanya gị; elela nhụjuanya anyị anya, kama n'ọbara nke Ọkpara Gị Chineke Kpọgidere n'Obe nke gbapụtara anyị ma nweta mgbaghara maka mmehie anyị. Mee anyi umuaka tozuru oke, ezigbo Ndi Kraist, Ndi ama Kraist, ndi ozi nke uwa n’uwa. Nye anyi nnukwu obi, di njikere inye ma nye onwe ya. Mee anyi ngwa oru nke udo, nkwekorita, idi n’otu na otu umunna.
Nwanyị nwanyị nke Mgbaasị lere anya Nnọchi nke ụwa Ọkpara gị, Poopu: kwado ya, kasie ya obi, debe ya maka ọdịmma nke Nzukọ-nsọ. Chebe ma chebe bishọp, ndị ụkọchukwu na mkpụrụ obi nsọ. Ọ na - eweta ọrụ ọhụụ na mmesapụ aka maka ọrụ nchụ-aja na ndụ okpukpe.
Maria, ị hụrụ ezinụlọ anyị, juputara na nsogbu, napụrụ udo na obi iru ala. Ọ na-akasi ụmụnne ndị na-ata ahụhụ, ndị ọrịa, ndị dị anya, ndị dara mbà n'obi, ndị na-enweghị ọrụ, na ndị nkụda mmụọ obi. Nye ụmụ gị nlekọta nne gị, nke na-echebe ha pụọ ​​na ihe ọjọọ ma mee ka ha too ike, mmesapụ aka na ahụike na mkpụrụ obi na ahụ. Lelee ndị na-eto eto anya, mee ka mkpụrụ obi ha doo anya, ịmụmụ ọnụ ọchị ha enweghị ajọ echiche, ntorobịa ha gosipụtara site na ịnụ ọkụ n'obi, mmụọ nsọ, oke ọchịchọ na ọmarịcha ihe ọ rụpụtara. Nye enyemaka na nkasi obi gị na ndị nne na nna na ndị agadi, Mary, tupu eluigwe na ndụ doro anya.
Na-ele gị anya dị mwute na ụkwụ nke Obe, anyị na-eche obi anyị ka anyị meghee obi ike kachasị ma anyị na-akụnye obi ike n'igosipụta ọchịchọ zoro ezo, arịrịọ siri ike, arịrịọ kacha sie ike.
Ọ dịghị onye ọzọ karịa ka You nwere ike ịghọta anyị, ọ dịghị onye, ​​anyị kwenyere, dị njikere inyere anyị aka ma ọ dịghị onye nwere ekpere siri ike karịa nke gị. Ya mere, gee anyị ntị mgbe anyị na-akpọku gị, gị onye dị ike nke amara na Chineke. Lee anya n'ime obi anyị, ha jupụtara na ọnya; lewe aka anyi, ha juputara n’ajuju.
Eledala anyị anya, kama nyere anyị aka ịgwọ ọtụtụ ọnya nke obi ma mara otu esi ajụ naanị ihe ziri ezi na ihe dị nsọ. Anyị hụrụ gị n'anya ma taa anyị bụ nne gị SS. Na-agbawa obi
Nke gara aga Post Gara aga post:Otu Nkeji Oge Ofufe: Na-atụgharị uche na mgbaghara
Next Post → Post ozo:Coronavirus: mpaghara atọ ga - eche ihu ihe siri ike mgbe ịtali mara ọkwa ọkwa ọkwa ọhụrụ